बच्चाको खाना कस्तो हुनुपर्छ ? | NepalDainik
बच्चाको खुराक पुरा भएन भने उ चिच्याएर रुन्छ । धेरै खानको माग गर्छ । बच्चा जन्मेदेखि एकबर्षसम्म सुतेको शिशु यसकारणले जाग्छ कि उ भोको छ त्यसैले उसलाई खाना जरुरी छ ।
धेरैजसो आमाहरु आफनो शिशुको जरुरत नभएमा पनि धेरै दुध खुवाउन चाहन्छन, बच्चाले दुध खान अरुचि देखाए पनि । बच्चा जति दुध सजिलैसँग लिनसक्छ त्यति नै खुराक दिनुस र उसको मनमा यो भावना बनोस कि तपाई उसको साथी हो ।
शिशु दुध किन पिउँछ ? यसको दुइवटा कारण छन पहिलो उ भोको भयो भने, दोस्रो उसलाई चुस्न राम्रो लाग्छ । यदि तपाई उसलाइ भेटभरि खुवाउनु हुन्छ र चुस्ने मौका दिनुहुन्छ भने जे चिज उसको हातमा पर्ने छ त्यो उसले चुसिरहने छ । राम्रो यहि हुनेछ की उसलाई एक दिनमा यति खाना दिने कि जसले उ भोको नहोस र उसको चुस्ने इच्छा पनि पुरा होस ।
साधरणतया शुरुमा शिशुको वजन कम हुन्छ । स्वस्थ शिशुको जन्मेको दुइ तीन दिनपछि रामो खाना पाएर आफनो सामान्य वजन प्राप्त गर्छ । धेरैजसो आमाहरु शिशुको वजन धेरै घटयो भने उसलाई बिभिन्न रोग लाग्छ भनेर चिन्तित हुन्छिन् ।
शिशुको खाने समय उसको वजन, उसको भोक , उ जाग्ने र सुत्ने आदि कैयन कुराहरु, डाक्टरको सल्लाहविना नै निश्चित गर्नु हुदैन । शिशुलाई नियमित समयमा नापेर तौलेर खुराक दिइरहने आवश्यकता छैन । शिशुको आवश्यकता हेरेर उसलाई खुराक दिन शुरु गर्ने । आमा र शिशु दुबैलाई असुविधा नहुने गरी खुराकको मात्र बढाउनुस् ।
शिशुको बारेमा सबैभन्दा धेरै ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो हो कि उसलाई भोक लागेको धेरै बेर सम्म रुन नपरोस । हरेक शिशुको भोक लाग्ने बानी फरक–फरक हुन्छ । यदि आमाले ठिक ढंगले सम्हाल्छिन भने उनले छिटो यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छिन् । यदि तपाईको शिशुको खानाको समय भैसकेको छ र उ सुतिरहेको छ भने तपाई उसलाई उठाउन सक्नुहुन्छ तर तपाई उसलाई खानको लागि मजबुर नबनाउनुस । यदि शिशुलाई जोडले भोक लागेको छ भने उ आफै रुन र चिच्याउन थाल्नेछ ।
बच्चाको खाने समयको क्रम विहान छ बजे, नौ बजे, दिउसो बाह्र बजे, तीन बजे, साँझमा छ बजे राति दस बजे र दुई बजे निर्धारित गर्ने । राति दुइ बजे खाना दिनको लागि तपाईले उसलाई उठाउने हैन कि उसले तपाईलाई उठाओस । यदि तपाइसँग जोख्ने मेसिन छ भने तपाइ हप्तामा एक पटक शिशुलाई जोख्नुस जसले गर्दा तपाईलाई उसको विकासको बारेमा जानकारी मिल्छ ।
बच्चाको लागि आमाको दुध नै सबैभन्दा उत्तम हो । जति धेरै र जति पटक सम्भव हुन्छ उति नै पटक उसलाइ स्तनपान गराउनुपर्छ । बच्चाले दुध पिउने समयमा सिधा या अडेस लगाएको स्थितिमाहोस् । बच्चाले बोत्तलबाट दुध पिइसकेपछि शिघ्र बोतल धुनुपर्छ । बोतल भित्र सफाइको लागि ब्रसको प्रयोग गर्नुपर्छ । जब बच्चाले ठोस खाना खान शुरु गर्छ तव उसलाइ २० मिलि–लिटर पानी एक पटकमा दिन शुरु गर्नुपर्छ । सारा दिनभरिमा १०० मिलि–लिटर पानी बच्चालाई पिलाउन सकिन्छ ।
बच्चालाई घरमा तयार गरिएको अनाजबाट खानाको शुरुवात गर्ने । राम्रोसँग पकाउने र मिचेको भातबाट प्रारम्भ गर्नु सबैभन्दा राम्रो उपाए हो । दोस्रो ठोस आहार फल हो जुन अनाज खुवाइसकेपछि दिइन्छ । बच्चाले मन लगाएर फल खान्छ । प्राय बच्चाहरुलाई केरा धेरै मन पर्छ । केरा राम्ररी पाकेको हुनुपर्छ । केरा मिचेर थोरै दुध मिलाएर खुवाउनु राम्रो हुन्छ ।
बच्चाको आहारा पातलो र क्रिमको रुपमा हुनुपर्छ । बच्चालाई छोक्रा भएको खाना मन पदैन । चपाउँन बच्चाले पछाडि सिक्छ , यसैले आहार ठोस चपाउने खालको नहोस ।
सधै घरमा बनेको खानेकुरालाई प्राथमिकता दिने बजारबाट किनेर ल्याएको खानेकुरा नखुवाउनुस । बच्चा आठ देखि बाह्र महिनाको उमेरमा भुटेको या उसिनेको आलु आहारमा सामेल गर्न सकिन्छ । नौ या दश महिनापछि रस पनि सामेल गर्न सकिन्छ । ठुलो चम्चाको दुई चम्चा फलको रस र त्यति नै पानी मिलाएर पनि पिलाउन सकिन्छ । नौ दस महिना पछाडि नै खानामा अण्डा सामेल गराउनुस । अण्डा अन्नमा मिलाएर दिन सकिन्छ । काँचो अण्डा दिन हुदैन । १८ महिनाको अन्तसम्ममा बच्चालाई गिलो आहार छोडेर परिवारले खाने आहारमा सामेल गराउनुपर्छ ।
No Comment to " बच्चाको खाना कस्तो हुनुपर्छ ? "